Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်း (2016) ၏အလိုက်အတွက်လိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး Exploring
comments: ဒီလေ့လာမှုက၏တွေ့ရှိချက် replicates ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု ကြောင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်သို့သော်ကင်းဘရစ်တဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ အဲဒီအစားထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲနှိုင်းယှဉ်ထက်, လေ့လာမှုအသစ် (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးတာဝန်၏ရလဒ်များကိုမှတစ်ဦးလိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုသုံးသော့ချက်ရလဒ်များကိုဖော်ပြထား:
အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် (တိုးလာအာရုံ) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်များ။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူ aligns ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရက်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူစမ်းသပ်မှုများတွင်“ အရက်ဆိုင်” နှင့်“ အရက်” စသည့်စကားလုံးများသည်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
ဤတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုက“ လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာနှစ်” နှင့် ၁) လိင်စွဲမှုရမှတ်များနှင့် (၂) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူတွေထဲမှာ ပိုနည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ် related ခဲ့ကြသည် သာ. ကြီး အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ ဒီတော့ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုရမှတ်များ + နှစ်နည်းပါးသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ = စွဲစွဲလမ်းမှုပိုမိုများပြားသောလက္ခဏာများ (ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု) ။ သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသည်မလိုမုန်းထားသူများ၌သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်အတွေ့ကြုံအများဆုံးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ စာရေးသူများကဤရလဒ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ“ အတင်းအကျပ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း” သည်သာမန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သို့) အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၏အထွေထွေနံပါတ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ နိဂုံးအပိုင်းမှကောက်နုတ်ချက် -
"ဒီရလဒ်တွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရှင်းပြချက်တစ်ခုကလိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတစ် ဦး ကပိုပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့အပြုအမူနဲ့ပါ ၀ င်တာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နှိုးဆွမှုပုံစံ [36-38] ပေါ်ပေါက်လာပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတူညီတဲ့နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ပိုလိုအပ်လာတယ်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်သည့်အခါအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည်ပိုမိုပုံမှန်ဖြစ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအာရုံခံစားလာရပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိုချင်သောနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်လာသည်ဟုထပ်မံငြင်းခုံသည်။ ဤအချက်သည် 'ကျန်းမာသော' ယောက်ျားများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုလေ့လာပြီးဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်နှိုးဆွမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်တုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်အလုပ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ဤအချက်က ပိုမို၍ တွန်းအားဖြစ်စေသော၊ လိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွသောပါဝင်သူများသည်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုထားသော“ ပုံမှန်” လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစကားလုံးများကို“ ထုံထိုင်းခြင်း” သို့မဟုတ် ပို၍ လျစ်လျူရှုလာခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြသမှုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုံ့ဆော်မှုကပိုပြီးအာရုံခံစားသိမြင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်လို့ပါပဲ။
3 ။ လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အနိမ့်ရမှတ်များနှင့်အတူသင်တန်းသားများအနက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနေသော်လည်းနီးပါးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
EUR စွဲ Res ။ 2016 Oct 1;23(1):1-6.
Albery IP1, လောရီဂျေ, မြိတ်: D, Johnson က HL, Hogan ကို C, မော့စ် AC အ.
နောက်ခံ / ရည်ရွယ်ပါသည်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေဘုံ aetiology ဝေမျှလိုလျှင်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စဉ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုခေတ်ပြိုင်အဆိုပြုချက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။
လိင်ကတက်ကြွစွာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြားဆက်ဆံရေးအကြားလိင်-related ဤစကားသည်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုဆနျးစစျဖို့, 55 လိင်တက်ကြွစွာတစ်ဦးချင်းစီဟာပြုပြင်ထားသော Stroop တာဝန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးပြီးစီးခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုလိင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူကြားတွင်လိင်-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသူတွေထဲမှာ, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏အဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အဆင့်မြင့်ရှိသူများအနက် သာ. ကွီးမွတျအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှု-related လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အာရုံကိုဦးစားပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတက်ကြွလိင်နှင့်မည်သို့ compulsive မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ခဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြားအပြန်အလှန်တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
THE ဆွေးနွေးရန် FROM မှ
ဤစာတမ်းသည်လိင်တက်ကြွသူများ၏အုပ်စုတစ်စုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစူးစမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စွဲလမ်းစေတတ်သောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများသည်ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေသများရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမျှဝေသည့်အတိုင်းအတာအထိဘုံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုရန်သက်သေအထောက်အထားများကိုလက်ခံပါကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်လည်းဖြစ်သင့်သည် ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်ညွှန်းကိန်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဘုံပုံစံကိုမျှဝေပါ။ သီအိုရီအရစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုနားလည်ရန်ချဉ်းကပ်မှုများစွာသည်ဤဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာရုံမခံစားနိုင်သော sensitization သီအိုရီကထပ်ခါတလဲလဲပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ် dopaminergic တုန့်ပြန်မှုက၎င်းသည် sensitized ပိုမိုသောစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်လာခြင်းနှင့်တ္ထုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအားတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတွန်းအားအားဖြင့်အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအဆိုပြုထားသည်။ 6] တ္ထုနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ဆက်စပ်အချက်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သောအချက်များ၏အမြင်နှင့်ဆက်စပ်သော corticostriatal circuit တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုငြင်းခုံခဲ့သည်။ ဤသည်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့် urgedfor အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားသောအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းပြသသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းအမြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောပြုပြင်ထားသော Stroop လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုတွင်ဤကဲ့သို့သောတုန့်ပြန်မှုပုံစံကိုပြသခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရလိင်အရတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆက်စပ်သောစကားလုံးများ၏အရောင်အမည်အားပိုမို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤဘက်လိုက်မှုပမာဏသည်အခြေခံအမှတ်နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသက်သေသာဓကသည်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပါအ ၀ င်ပစ္စည်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအပြုအမူများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသူများနှင့်အလားတူရလဒ်များ၏အလားတူရလဒ်များကိုအတည်ပြုပေးသည် [18-17, 21] ။
ဒီသက်သေအထောက်အထားလိင်တက်ကြွစွာတစ်ဦးချင်းစီ၏လူဦးရေအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုသရုပ်ပြပေးသည်နေစဉ်, ငါတို့သည်လည်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အမူအကျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏အသက်ရှည်နှင့်ဆက်စပ် compulsive အကြားဆက်ဆံရေးရှာဖွေစူးစမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ  နှင့် neuropsychopharmacological ချဉ်းကပ်မှု  တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားအခြေခံမူများနှင့်အညီ, သာ. ကြီးမြတ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုထပ်ခါတလဲလဲအပြုအမူပြဋ္ဌာန်းနှင့်အပြုအမူ  အမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးအလွန်အကျွံစားချင်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောရပါမည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးအဘယျသို့သျောလညျး, အမူအကျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် compulsive ၏အသက်ရှည်အကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ခန့်မှန်းဘယ်လိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုစိုးရိမ်ကြောင်း-related လှုံ့ဆော်မှုအဘို့ဖြစ်၏
အခြားအစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ယခင်ဆက်စပ်အလုပ်နှင့်အညီ, ကအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ခန့်မှန်းချက်များတွင်အမူအကျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးတစ်ဦးခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်အလုပ်ယခင်ကအပြုသဘောဆက်စပ်မှု [11, 32] သရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုရမှတ်ခန့်မှန်းဘို့တက်ကြွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်၏ကာလအကြားအပြန်အလှန်၏အရေးပါမှုကိုဖော်ထုတ်နေဖြင့်အလုပ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်မှထည့်ပါ။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသူတွေထဲမှာ, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏အဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အဆင့်မြင့်ရှိသူများအနက်တိုးမြှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ အနှစ်သာရခုနှစ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်များစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ-related လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အာရုံကိုဦးစားပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတက်ကြွလိင်နှင့်မည်သို့ compulsive မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ခဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြားအပြန်အလှန်တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
ဤအရလဒ်များအတွက်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်တစ်လိင် compulsive တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမို compulsive အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နေသည်အဖြစ်တစ်ခုဆက်စပ် arousal template ကို [36-38] ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးအစွန်းရောက်အပြုအမူသဘောပေါက်ခံရဖို့ arousal ၏တူညီသောအဆင့်ကိုလိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းကိုပိုပြီး compulsive အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နေသည်အတိုင်း, neuropathways ပိုပြီး '' ပုံမှန် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုမှ desensitized ဖြစ်လာစေရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆန္ဒရှိသည့် arousal နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပိုပြီး '' လွန်ကဲ '' လှုံ့ဆော်မှုမှလှန်သောနောက်ထပ်စောဒကတက်သည်။ ဒီ 'ကျန်းမာ' 'ယောက်ျားအချိန်ကျော်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လေ့ဖြစ်လာနှင့်ဤလေ့လျော့နည်းသွား arousal နှင့်အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှု  ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုဖေါ်ပြခြင်းအလုပ်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို compulsive, လိင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနှင့်တိုးချဲ့ compulsive နှင့်လျော့နည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူရှိသူများနေဆဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြသနေစဉ်ထိုကဲ့သို့ Display, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလျော့နည်းသွားအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ '' ပုံမှန် '' လိင်-related စကားကို '' ထုံ 'သို့မဟုတ်ပိုပြီးလစျြလြူရှုဖြစ်လာကြပြီအကြံပြု အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်သိမှတ်ခံစားမှုရောင်ပြန်ဟပ်သောကွောငျ့။ အနာဂတ်အလုပ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် desensitised လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်လိင်တက်ကြွစွာတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဒီလေ့လာရေးစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။